Text Link Mgbasa ozi esighi na Dethrones Google Adsense (na m Blog) | Martech Zone
Tuesday, July 3, 2007 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
Google Adsense abụwo ụzọ bụ isi esi enweta mgbasa ozi na blọgụ m kemgbe ọ malitere. Enwekwara m Òtù Ụlọ Ọrụ mgbasa ozi na ndepụta RSS m, Kontera nhazi gburugburu na post m, na Ederede Njikọ Mgbasa ozi. M na-eme Nyocha site na Nyochaa M ma nweta oge ufodu Starbucks onyinye site na PayPal. Chei!
On a mma ọnwa, M nwere ike ịdọrọ ala $ 300, tere aka na $ 10k + nke John Chow akwada, ma ka na-asọpụrụ n'echiche m. Ga-achọpụta na ihu akwụkwọ m dị ọcha na mgbasa ozi niile. Enwere m ike itinye mgbasa ozi ebe niile na ya, mana achọghị m ịkwanye mgbasa ozi na ndị ọbịa na-alọghachi na saịtị m ugboro ugboro. Kama nke ahụ, ana m eji mgbasa ozi maka ndị folks na-achọta m n'ụzọ na-enweghị isi, site na ọchụchọ na ntụaka.
Google Adsense bu, uzo m kachasi enweta ego… rue ugbu a. Ederede Njikọ Mgbasa ozi emebisiela ego m Google Adsense na mbubreyo. Na Mee, emere m dollar ole na ole. Na June, achitere m ego ruru Adsense na - enye - mana enweghị m Google Adsense kachasị. Mana na July, achọrọ m iweta ihe okpukpu abụọ site na Mgbakwunye Njikọ Njikọ karịa Adsense. Chaị.
Isi ihe Ederede Njikọ Mgbasa ozi ihe ịga nke ọma bụ na e wuru ya maka blog, ọ bụghị weebụsaịtị. Ọbụna ha na-enye ngwa mgbakwunye maka ndị ọrụ WordPress iji mee ka ọ dị mfe. Ndị mgbasa ozi nwere ike ịzụta 'posts' karịa okwu. Nke ahụ bụ nkwekọrịta dị ịtụnanya, maka blogger na onye mgbasa ozi. Ọ bụrụ na ị dee post na isiokwu enyere, ọ bụghị egwu na ị nwere ike ịzụta isiokwu ị maara na-akwado ngwaahịa gị? Mara mma dị ịtụnanya ohere.
WordPress: Ihe ntanetị abụọ SEO maka Meta Tag Creation
Jul 7, 2007 na 1: 47 AM
Saịtị m anọọla ọnwa 3 mana ebiela n'etiti mmelite Google PageRank. Ọ bara uru itinye akwụkwọ maka akaụntụ onye mbipụta, ma ọ bụ ka m chere ruo mgbe mmelite Google PageRank na-esote?
Anụla m na TLA na-enyocha saịtị ndị na-akwadoghị na mbụ, mana anụkwara m na usoro ahụ nwere ike were n'ezie Otee aka.
Jul 7, 2007 na 10: 23 AM
M n'eziokwu agaghị m akwụ ụgwọ maka akaụntụ onye nkwusa, m ga-echere. Ka ọ dị ugbu a, ị nwere ike ijiGoogle Webmasters iji hụ na saịtị gị dị n'usoro. Ee na TLA mana ejighi m n'aka maka usoro iheomume. Agụrụ m akwụkwọ ozi a ebe onye na-ede blọgụ nwetara nkwado saịtị ya. N'ụzọ na-emegide onwe ya, ọ naghị enweta okporo ụzọ ọ chọrọ iji nweta ezigbo ego. M ga-etinye uche n'ịkwọba okporo ụzọ. Ọ na-amasị m ime ya site na ịza ajụjụ na blọọgụ ndị ọzọ nke m na-agatụbeghị. M na-agbakwụnye na mkparịta ụka ahụ, ọ bụghị nanị na m na-ekwu 'hey!'. 🙂 Echere m na ọtụtụ ndị na-ede blọgụ na-eleta ndị na-ekwu okwu ha. Nweta okporo ụzọ ahụ na ihe niile ga-esochi!
Jul 12, 2007 na 6: 43 AM
Etinyere m akwụkwọ maka TLA ọnwa ole na ole gara aga mana anabataghị m. Chee na ebe nrụọrụ weebụ m anaghị ewepụta okporo ụzọ zuru oke ma ọ bụ nwee ndị debanyere aha Feedburner zuru oke. Amaghị m ihe njirisi ha na-eji maka usoro nnabata?
Nov 17, 2009 na 12:32 ehihie
Echeghị m na feedburner ndị debanyere aha bụ otu n'ime njirisi, enwere m ndị debanyere aha 6 wee banye na :).
My pagerank bụ 4 n'agbanyeghị, yabụ ikekwe ọ bụ ya mere m ji bata…
Ọ nwere onye nwere echiche ma ọ bụrụ na ị nwere ike iji TLA na google adsense ọnụ?
Julaị 13, 2007, elekere 12:05 nke ehihie
Ndụmọdụ dị mma na nso nso a na mgbasa ozi. M na-eche echiche nke na-etinye a di na nwunye nke dị iche iche webụsaịtị na-anwale mmiri na mgbasa ozi.
Ọkt 14, 2007 na 10:39 AM
Daalụ maka ndụmọdụ gị bara ezigbo uru. Ị nwere ike ịgwa m ma ọ ga-ekwe omume iji TLA na Adsense n'otu weebụsaịtị? ọ bụghị megide Google TOS? Daalụ!
Ọkt 14, 2007 na 5:34 PM
Ọ bụghị megide Google TOS iji akụrụngwa mgbasa ozi ndị ọzọ. N'ezie, ị ga-ahụ ọtụtụ blọọgụ nwere ego na-enweta mgbe niile na-agba ọtụtụ isi mmalite.
Nov 19, 2009 na 1:59 ehihie
Ka m malitere iji mgbasa ozi njikọ ederede, m ga-ahụ ka ihe si aga!